Home / DASTUURKA JAMHUURIYADDA SOMALILAND PDF
Author: Vudoshicage Tygotaxe
On the whole, the revisions tidied up the constitution and no fundamental changes have been made. Fulinta xeerarka aan Waaxda Garsoorka awoodaheeda hoos iman.
Inuu ka garsooro khilaafka ka dhex abuurma laamaha Dawladda oo dhinac ah iyo xubno ka tirsan dadweynaha oo dhinac ah ama dadweynaha dhexdooda. Retrieved from ” https: Nidaamka Siyaasadeed Qod. Xeer baa caddaynaya sida lagu heli karo ama laga waayi karo jinsiyadda Somali land.
Madaxweynaha ayaa guddoomin doona fadhiyada Golaha Wasiirada ee caadiga ah iyo kuwa aan caadiga ahayn. Afafka kale waxa loo adeegsan karaa wixii looga maarmi waayo. Dawladdu waxay horumarinaysaa hiddaha iyo dhaqanka suubban ee bulshada, waxayna tirtiraysaa caadooyinka wax u dhimaya Diinta, horumarka, janhuuriyadda iyo caafimaadka bulshada.
Sidaa darteed, cashuur ama takaaliif aan xeer jidayn lama qaadi karo. Maxkamadaha Hoose Qod. Wax-ka-beddelka iyo Kaabidda Dastuurka. Muddada xilka Golaha Wakiiladu waa 5 shan sano oo ka bilaabmaya maalinta Maxkamadda Sare ay ku dhawaaqdo go’aamada doorashada. Xeer ayaa qeexaya ciqaabta ka dhalan karta ku xad gudubkooda. Waxa Ku-xigeenka Guddoomiyaha noqon doonaa garsooraha dhinaca darajada ugu sarreeya garsoorayaasha ka tirsan Maxamadda Sare Seniority.
Wasiirada iyo Wasiir-ku-xigeennada waxa ku waajib ah inay ka qayb galaan fadhiyada Golaha Wakulada iyo Guddiyadiisa simaliland qoraal lagaga codsado sidaa; waxaanay xaq u leeyihiin inay ka qayb qaataan doodda; hase yeeshee xaq uma laha codayn.
Hadiyadaha la siiyo Madaxweynaha iyo Ku-xigeenka Madaxweynaha iyo Marwooyinkooda iyo Madaxda sare ee Qaranka ee Ieh muuqaal Qaran iyada oo lagu maamuusayo xilka ay hayaan waxa weeye hanti Qaran. Ciqaab iyo dembi waa wixii qodob xeer ama qaanuun jideeyey, waxaana reebban in ciqaabta loo fuliyo hab aan xeerka waafaqsanayn. Waxa fadhiga Guddidu ku ansixi karaa marka ay joogaan toddoba 7 xubnood. Marka uu hawshii loo doortay u gudan dasturka waayo caafimaad-darro darteed; iyo x.
Golaha Wakiiladu waa xubno ka wakil ah dadweynaha; waana Qaybta laad ee Xeer-dejinta dalka, ansixinta xeerarka, oggolaanshaha iyo ilaalinta siyaasadda guud ee hoggaaminta dalka. Buuxinta Jagada Golaha Wakiilada Qod. Jamhuuriysdda iyo Dembi Qod. Shuruudaha Qofka bo Dooranayo Golaha Guurtida. Dib-u-dhigid fadhi wuxuu ku ansaxayaa aqiabyad fudud hal dheeri ; waxaana dib loo dhigi karaa ugu badnaan toddoba 7 maalmood.
Xubinta Golaha Guurtida uma bannaana inay qabato xil kale oo Qaran iyadoo xilkii loo xulay haysa; umana bannaana may xilka uga faa’iidaysato dano gaar ahaaneed. Maxamadaha Racfaanka ee Gobolladda; 3. Ma bannaana in qofna la qabto, la baadho ama la xayiro, haddii uusan markaa dembi faraha kula jirin, ama iamhuuriyadda amar qabasho oo sababaysan ku soo saarin Garsoore awood u lihi.
Waa inuusan dembi maxkamadi ku xukuntay ka gelin Qaranka Somaliland. Hab-maamuuska Madaxda Sare ee Qaranka Qod. Madaxweynuhu dalka kama maqnaan karo 45 cisho oo isku xiga muddo ka badan sabab caafimaad mooyaane.
Sidoo kale waxay ka hortegaysaa fisqiga iyo anshax- xumada. Although the Republic of Somaliland was independent for a short period in Juneit later unified with Italian Somaliland to form Somalia.
Jagada Golaha Guurtidu waxay ku bannaanaysaa haddii ay timaado xaalad ka mid ah xaaladaha ku tilmaaman qodobka 50aad. Mashruuc-sharci Baarlamaanku oggolaadeen wuxuu xeer dhaqan gal ah noqonayaa marka uu Madaxweynuhu u soo jamhuuriyadd hab waafaqsan Dastuurka. Doodaha ku saabsan aafooyinka dabuciga ah; kh- Doodaha Ia soaliland xeerarka deg-degga ah.
Golaha Wakiiladu waxa uu ka doodi karaa, waxna ka beddeli karaa miisaaniyadda, kuna ansixinayaa go’aan Gole. Waxbarashadu waa mid u danaynaysa dadweynaha, kuna habaysan waayaha iyo deegaanka gaar ahaaneed somailland bulshada Somaliland. Ciidanka Booliisku waxa uu u xilsaaran yahay ilaalinta nabadgelyada iyo dhaqan-gelinta xeerarka; qaab-dhismeedkoooda iyo waajibaadkoodana xeer ayaa qeexaya.
Notify me of new comments via email. Garsoorku waxa uu awood gaar ah u leeyahay: Xuquuqda, xorriyaadka iyo waajibaadka Dastuurku xaqiijiyey, haweenku ragga way ula siman yihiin, wixii Shareecadda Islaamka midkood u gaar yeeshay mooyaane.
Maamuulka Gobollada iyo Degmooyinka. Hay’adaha Dawadda ee Qaranku waa: Daryeelka Qaybaha Bulshada Baylahsan Qod. Hay’adaha Garsoorku waxay ka kooban yihiin maxkamadaha iyo Xeer-ilaalinta.
Xeer-ilaalinta Guud ee Qaranku waxay ka kooban tahay Xeer-ilaaliyaha Guud iyo ku-xigeennadiisa.
Tirada xisbiyada siyaasiga ah ee dalka Jamhuuriyadda Somaliland kama badnaan karaan saddex 3 xisbi. Qof kasta wuxuu xor u yahay caqiidadiisa, lagumana qasbi karo inuu qaato tu kale.
Fadhiyada Golaha Guurtida waa kuwa furan; waxaana ay noqon karaan kuwa xidhan sida ku cad Dastuurka. Waa inuu yahay muwaadin ka tirsan Jamhuuriyadda Somaliland. Shaqaalaha kale ee ka shaqeeya Garsoorka waxay hoos imanayaan xeerarka shaqaalaha Dawladda.